Kubva paWordpress kuenda kuJekyll. Nei ndakarega zvemukati mamaneja | Linux Vakapindwa muropa
Kubva paWordPress kuenda kuJekyll. Nei ndakarega zvemukati mamaneja
Chimwe chezvinhu isu vatepfenyuri vemahara uye yakavhurwa sosi software chatinofanira kuyeuka ndechekuti havazi vese vane zvido zvakafanana, nguva kana chishuwo chekuzvipira kuisa kana kudzidza chirongwa chitsva. Uzivi hwesoftware yemahara hwakakura, asi kana uri wega graphic dhizaini, unenge wakabatikana kuwana uye kupedzisa mabasa anokutsigira kuti udzidze kuita muInkscape zvaunowanzoita neAdobe Illustrator.
1 Kubva paWordPress kuenda kuJekyll
2 Zvemukati mamaneja, masisitimu uye vagadziri vea static masaiti.
Kubva paWordPress kuenda kuJekyll
Kusvika kumagumo egore rapfuura ndakaita sarudzo yeku rega kushandisa WordPress pane yangu bhurogu uye chinja kushandisa static saiti anovaka inonzi Jekyll. Matambudziko akasiyana siyana ehunhu hwepamoyo pamwe nekusungirwa pabasa zvakakonzera kuti kuchinjirwa kunonoke. Izvo zvakare hazvina kubatsira kuoneka kusakwanisa kwevagadziri veakavhurika sosi mapurojekiti kuunganidza anodikanwa magwaro munzvimbo imwechete uye kuinyora nenzira inonzwisisika.
Ndichiri kufunga kuti yaive zano rakanaka. Zvangu. Kunze kwekunge iwe uri fan of tekinoroji, inoda kusevha zviwanikwa zve server kana kuda zvakanyanyisa kugadzirisa, zviri nani kunamira neWordPress kana edza mumwe maneja wezvinyorwa.
Zvemukati mamaneja, masisitimu uye vagadziri vea static masaiti.
Ngatiti iwe unoda kutamira mumba. Iwe une zvitatu zvingasarudzwa:
Tenga imba yatovakwa: Mairi iwe unongofanira kutora fenicha yako uye kusungirira mifananidzo.
Raira imba zvichibva pamamodule akagadzirwa
Hira mugadziri uye kambani yekuvaka uye uzviite kune zvaunofarira.
Zvemukati mamaneja senge WordPress ivo vanokutendera iwe kuti utarise chete pane izvo zvirimo. Ivo vane akateedzana ematemplate ayo anoita otomatiki kumiririra kweruzivo uye mawedzera-ons anowedzera mamwe mabasa.
Masystems iwo seti yezvinhu zvaunogona kusanganisa kuti ugadzire tsika zvewebhu mapeji. Iwe unofanirwa kuve nehunyanzvi hwekunyora kuti ukwanise kuzvibatanidza uye kuwedzera kudyidzana.
Musiyano mukuru ndewekuti zvemaneja maneja zvinoda zvimwe server zviwanikwa sezvavanoda dhatabhesis. Ndiyo dhatabhesi iyo iwe yaunowana iwo ruzivo rwekuti ungamiririra sei izvo zvirimo, zvemukati zvinomiririrwa, mabasa uye neropafadzo dzevashandisi uye neruzivo nezve peji rinotsvaga injini dzekutsvaga.
Paunoshandisa chimiro, Iwe unofanirwa kuisa peji nepeji ruzivo rwese rwunodiwa nemainjini ekutsvaga, kuitira kuona kwakaringana kwenzvimbo iyi mumafomati eescreen akasiyana uye nzvimbo yezvinhu zvekunze.s izvo zvinoratidzwa kana kuwedzerwa kusangana.
Static vavaki venzvimbo bvumira kugadzirisa mamwe mabasa maratidziro aungaita data rekuzivisa resaiti, kuiswa kwezvikamu muzvikamu kana kufungidzira
Izvo zvakakosha kuti uite mutsauko. Iwo mamaneja emukati anotsvaga iyo ruzivo mune dhatabhesi uye anoiratidza iyo nguva yega yega mushandisi paanobatana newebhu peji. Static saiti vavaki vanogadzira iyo peji rewebhu iyo inosanganisa iyo ruzivo irimo mune yayo kodhi.
Ini ndoda kusimbisa kuti dzino dzakateedzana zvinyorwa Inofanira kuverengerwa sejenareta nezvangu zvakaitika uye kwete senzira yekubika. Kana iwe uchizotanga munyika yekubloga, iwe unofanirwa kupa nguva yako yese kune izvo zvemukati uye kwete kuti ubate nemusoro akasiyana eMarkdown zvipfupiso kana Liquid mirairo. Paunenge uchitova neruzivo uye kuverenga, iwe ungangoda mamwe maitiro ekugadzirisa. Ipapo chete ndipo paunofanira kufunga nezvaJekyll
Kubva kwandakaita kubva paWordPress kwaive nekuda kwekuti sarudzo yemahara yaive diki kwandiri, uye sarudzo dzekubhadhara, munyika umo mutengo wedhora haumire kukwira, yanga isiri imwe nzira inoshanda. Kune izvi isu tinofanirwa kuwedzera kuti madingindira akatanga kukumbira kuisirwa mawedzero, uye kana iwe waida kuve neanopfuura theme imwe iwe waizowana akawanda akasiyana mawedzero akazadzisa basa rimwe chete.
Muzvinyorwa zvinotevera zvinotevera ini ndichawedzera zvakanyanya pane mutsauko uripo pakati penzira imwe kana imwe yekublogi iyo yakanditungamira kuti ndiite sarudzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kubva paWordPress kuenda kuJekyll. Nei ndakarega zvemukati mamaneja
Ndiri kufarira. Ini ndashandisa WordPress kwemakore, kutanga pane yakabhadharwa inomiririra ine chakakomba chirongwa chakafa uyezve pane yavo .com chikuva mune yemahara fomati. Mutengo weiyo Premium vhezheni inoita senge yakawandisa kwandiri.
Ndakawana Jeckyll, asi kusakwanisa kwangu kwakaita kuti ndisarudze Blogger…. Ndichiripo, ndakanyangadzwa, kunyange zvichindishandira .. ndinowana zvinyorwa zvishoma paJeckyll kana Hugo, akafanana masisitimu.
Zvandakaita kutsvaga template ye https://github.com/topics/jekyll-theme uye tanga kugadzirisa
Delio G. Orozco Gonzalez akadaro
Imwe neimwe inosvika uye inotsvaga mhinduro idzo dzinowanzo kuve dzinoshanda uye dzinoshanda. Muchikamu chino cheCuba yakadzika (Manzanillo, guta riri kumabvazuva kwenyika), takagadzira chikumbiro (Alarife) chinotitendera kuti tigadzire saiti pane chero chidzidzo; iyo, inogona kuve Thematic Encyclopedia nekuda kwehuwandu, kusiyana uye kudzika kweruzivo rwunopihwa.
Pindura kuna Delio G. Orozco González
Isa chinongedzo kana chiripo kuti utore
Zvikamu zvewebsite. Kubva paWordpress kuenda kuna Jekyll 2
Iwo akanakisa maficha e manejimendi enharaunda dzedzidzo